KNPP – Page3– Karenni National Progressive Party
ဧည့်သည်တို့ရဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံ အိမ်ရှင်များအကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လျှပ်စစ်မီးပေးပို့ ထုတ်လွှတ်ပေးနေတဲ့ လောပိတရေအားလျှပ်စစ်သွားရာလမ်းဘေးက နာမည်ခပ်ဆန်းဆန်းနဲ့ သတ္တပလူဆိုတဲ့ရွာ …… အဲ့ဒီရွာမှာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ကတည်းက နေထိုင်လာပြီး ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေပေါ်မှာ စပါး၊ ပြောင်း၊ နှမ်း စတာတွေကို မိသားစုရည်တည်ရေးအတွက် လုပ်ကိုင်လာသူဒေသခံတွေထဲက တစ်ဦး ……. သူကတော့ ကလေးငါးယောက်ဖခင် အသက်ငါးဆယ်ကျော်အရွယ်ရှိ ကယားလူမျိုး ဦးကွယ်ရယ်….
ကရင်နီပြည်တွင် ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး လူထုချီတက်လမ်းလျှောက်ပွဲ ပြုလုပ်
KnIC ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေးအတွက် ကရင်နီပြည်လူထုလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ကို ယနေ့ မေလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှု၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေးဖြစ်ပြီး တောင်းဆိုချက် (၃) ချက်ပါဝင်သည်ဟု ကရင်နီပြည်လူငယ်များသမဂ္ဂ (UKSY) အတွင်းရေးမှူးချုပ် ခွန်းဘားနတ်ဘုဒ် ကဆိုသည်။ “ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ အဓိကတောင်းဆိုချက်တွေကတော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ပွဲအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့ အရပ်သားအရေးဆောင်ရွက်ပေးပြီး
ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် နော်လူဒီး နှင့် အင်တာဗျူး
ကရင်နီပြည် (ကယား) NLD မှ ဦးဆောင်ပြီး ကရင်နီ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) မှ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA) ရေးထိုးနိုင်ရေး ထောက်ခံကြိုဆိုပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် နော်လူဒီး နှင့် အင်တာဗျူး။ KnIC – KNPP အနေနဲ့ NCA
NLD ဦးဆောင်ပြီး KNPP မှ NCA လက်မှတ်ထိုးရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည်
KnIC လက်ရှိ အာဏာရ ပါတီဖြစ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ဦးဆောင်ပြီး ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှာ ကရင်နီ အမျိုးသားပါတီ (KNPP) မှ တစ်နိုင်လုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ဖိအားပေးသည့်အနေဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတခုကို လာမည့်
ပြန်သွားတဲ့ ကရင်နီဒုက္ခသည်တွေ ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲ…
ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်းအမှတ် (၁) ကနေ ပြည်တွင်းကိုပြန်လည်အခြေချဖို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် အမှတ် (၁၃) နယ်စပ်လမ်းကနေ ဒုက္ခသည် ၂၀ ဦးဟာ မယ်စဲ့မြို့ ကို မေလ(၇)ရက်နေ့က ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကရင်နီဒုက္ခသည် ပြန်လည်နေရာချထားရေးနဲ့ ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ က တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့
ရှားတောမြေမှ စစ်ဘေးရှောင် လူငယ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သင်တန်း
May 22, 2018 aungnge 0
May 12, 2018 aungnge 0
May 8, 2018 aungnge 0
ကရင်နီလူငယ် ကိုယ်စားလှယ် နော်ဖောဝါးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
May 7, 2018 aungnge 0
Copyright © 2018 KNPP. Theme: ColorNews by ThemeGrill. Powered by WordPress.